Sababta Loo Xirayo Garoonka Dayniile oo Lala Xiriireyey Naasnuujin Loo Sameynayo Bashiir Raage Shiiraar oo Shirko la ah Prof. Geedi
War ka soo baxey wasaarada arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in lagu wargeliyey dayaaradaha ka diwaan gashan dalka Kenya iney joojoyaan duulimaadyadii diyaaradahoodu maalin walba ay ku tegi jireen garoonka Dayniile oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa loo ogolaaday dayaaradahaas iney ku soo degaan garoonka Cisaleey oo uu leeyahay Bashiir Raage Shiiraar oo ay shirko yihiin Maxamed Dheere iyo Prof. Geedi.
Warkaan ayaa soo baxay kadib markii uu Jowhar ku soo laabtay C/risaaq Cusmaan Jurille oo latashii dheer ugu maqnaa Itoobiya. Garabka Jowhar ayaa maleegay qorshahaas waxeyna xeelad uga raadsadeen Itoobiya meelmarinteeda.
Col. Cabdullahi Yusuf ayaa soo bandhigay fasiraada danihii loo aadey Itoobiya kaas oo ahaa in beelaha dega Muqdisho hubka ay hayaan la isku jeediyo. Waxaana hadda si gaara bar tilmaaman noqday dagaaloogaha Dayniile mudane Qanyare.
Dayniile iyo Cisaleey labaduba waxey ku kala yaalaan duleedka Muqdisho koofur iyo waqooyi, waxaana kala leh labada beelood oo degaanka Xamar ugu awooda badan. Labada garoon midna kan kale ma dhaamo tayo iyo nabadgelyo ahaan laakiin ujeedadu waa in la is tuso labadaas beelood.
Oday Maxamuud Cali Jimcaalle koogaar oo ka mid ah waxgaradka Beesha degta waqooyiga Muqdisho ayaa si cad u sheegay in beeshiisu ay soo dhaweyneyso xiritaanka garoonka Dayniile. Odeygaas ayaa intaasi ku daray in Beeshiisu aysan u horseedi doonin dagaal sokeeye oo dhexmara walaalaha degan magaalda Muqdisho, laakiin cidii u horseeda ay kala kulmi doonto jawaabteeda, isagoo si raaciyey in cidii ka ka hortimaada amarka Col. Cabdullahi Yusuf aysan beeshiisa ka heli doonin wax taageero ah haddii uu dagaal dhexmaro iyaga iyo Col. Cabdullahi Yusuf.
Intaas markaad fiirisid waxaa ku soo baxaya wixii loo aadey Itoobiya iyo waxa loogu saantiranayo Kenya ineysan is lahayn. Hadda ka hor amar ay soo saartay Kenya oo ay ku xanibeysey viisaha xooxda xaruuntoodu tahay Xamar oo siyaasada uga soo horjeeda Col. Cabdullahi ayaa u muuqda mid aan shaqeyn. Sidaas oo kale ayaa la filayaa inuu ku dhamaado amarkaan iyo kuwo kale oo soo daba socda. Laakiin waxaa la sugayaa isku dhacyada ka dhasha amaradaas u muuqda kuwo u daneynaya ujeedo gaara oo looga jeedo in la isku mashquuliyo xoogaga degan Muqdisho.